Home > Tigidhada Tareenka SBB ee Jaban iyo Wadooyinka Safarka Qiimayaasha
Tareenada SBB waxay kujiraan meesha ugu sareysa ee nidaamka tareenada qaran ee Yurub, iyo gudaha 2017 ayaa kaalinta koowaad ka galay tayadiisa adeeg, darajada amniga, iyo tusmada waxqabadka.
Adeegga tareenka ee SBB waa mid ka mid ah adeegyada ugu waqtiga wanaagsan ee tareenka adduunka laga helo, leh wax ka yar 3 daahitaan daqiiqado ah.
Tunnelka tareenka ee SBB ugu dheer, tunnelka Gotthard, ee Swiss Alps, tallaabooyin 57.1 kiiloomitir oo wuxuu dhigaa rikoor adduunka ah.
Tareenada SBB ayaa baahi weyn loo qabaa, oo leh kaliya 2 shirkadaha kale ee tareenka sida tartan, iyagu weli waa xulashada ugu sareysa ee tareenada Switzerland. Waxay awoodaan inay dejiyaan xaddidaadda tigidhada tareenka sida tii oo kale oo mamnuucaya is-weydaarsiga tigidhada ama soo-celinta ilaa ay tahay nooca tikidhada Ganacsiga.. In kasta oo ay weli jiraan degello internet oo aad dadka uga iibin karto tigidhadaada dadka labaad, SBB ma ogolaaneyso iibinta tigidhka gacanta labaad. Sidee tani u caawineysaa inaad lacag dhigato? Dalbo tigidhkaaga keliya markaad hubto jadwalkaaga inuu kaa badbaadin doono inaad hal tikit laba jeer dhigto maxaa yeelay wax baa soo baxay oo ma isticmaali kartid tigidhka asalka ahaa..
Marka aad tahay 25 waxay ku saabsan tahay baashaal, oo hadda leh kaar toddobo ah, waad ka safri kartaa si aan xad lahayn 7 pm. Micnaha, Kaarka socdaalku wuxuu ansax yahay inta udhaxeysa 7 galabnimo 5 waxaan ahay. Sidaas, sidee u shaqeysaa? Toddobaatanaad waxaa lagu dhejiyaa kaarkaaga socdaalka ee Swiss Pass oo waad u isticmaali kartaa joogsi kasta.
Si aad u hesho SBB-kaaga oo aad waqtiga saxda ugu dhacdo, wadada tareenka waxay kugula talineysaa inaad ugu yaraan timaadid 1 saac ka hor inta uusan tareenkaaga SBB dhoofin. Waxaan joognaa tareenka Save A tan iyo markii aan waxbadan kusoo safarnay tareenada SBB, kugula talin inaad timaado xitaa 30 daqiiqado kahor, markaa uma baahnid inaad ku deg degto xarumaha waaweyn ee tareenka si aad tareenka u qabato. Intaa waxaa dheer, saacad ayaa ku filan wakhti aad ugu raaxeysatid dukaamada iyo meelaha cuntada laga istaago oo aad u hesho waxyaabahaas aad ugu baahan tahay safarka tareenka inuu noqdo sidii ugu macquulsan oo macquul ah.
Basel Saldhigga SBB waa saldhigga ugu weyn Yurub ee xadka. Taasi waa in la yiraahdo Laga soo bilaabo Switzerland, waad u safri kartaa Jarmalka, France, Austria, iyo Nederland oo leh adeegga tareenka ee SBB. Tan ugu muhiimsan, waxaa jira 50 dukaamada iyo maqaayadaha ku yaal saldhigga Basel, halkaas oo aad uga adeegan karto wax kasta oo aad ugu baahan tahay safarka. Tusaale ahaan, waad iibsan kartaa cunto fudud iyo xusuus-daqiiqadii ugu dambeysay. Laga soo bilaabo saldhigga Basel SBB, iyo saldhigyada waaweyn ee aad u safri karto waa Frankfurt, Paris, iyo Salzburg.
Haa. Waad ku raaxeysan kartaa Free Wi-Fi adeega dhamaan tareenada SBB iyo dhamaan casharada safarka ilaa 60 daqiiqo.